[Ankapobeny ] 19 Martsa, 2009 09:05
Sao dia lany andro hamaly faty eto
Niarahana nahalala ny vaovao nampalahelo nahazo ny Filohan'ny FJKM Lala Rasendrahasina izay pasitera no isan'ny mpitondra ao @ FFKM izay mpanelanelana ihany koa t@ ireny fotoana sarotra nodiavn'ny firenena ireny. Novonoina sy nodarohana izy ary nasaina nisotro ny pipiany. Heloka ho an'ireo izay nahavita izany. Tsy hahazo famelan-keloka mandrakizay.
Manarak'izay dia mandeha ny antso avo ao @ Radio viva ny tokony hisamborana ireo rehetra nitondra t@ fitondran-dRavalomanana. Manomboka @ filoha Ravalomanana izany ka manaraka azy koa ireo minisitra sy ny senatera ny depiote sy talen'ny ladoany sy ny olona rehetra nihinana sy nanodina ny volam-bahoaka. Aza adino fa toerana hifadimbiasa io toerana io ka mba diniho ihany fa tsy anareo mandrakizay koa akory ny fitondrana. Tsy izany ihany moa ve no nahatonga antsika hankahala iny fitondrana iny izy nisambotra sy nanagadra ireo izay lazaina fa nangalatra sy nanodina dia izao voafandrikin'ny valifaty izao sahady nefa vao 2 andro monja no eo @ fitondrana.
Maro ny zavatra hafa tena maika amiko dia ny fanarenanana ny simba rehetra sy ny hamerenana ireo vahiny mpampiasa vola niasa teo aloha. Mandeha mantsy ny feo oe ho roahana daholo ireo vazaha ao @ QMM sy ny atsy ambatovy!!! Dia mbola kilasiko ho valifaty ihany koa izany fa tsy fitiavana tanindrazana sa oe endrika fivarotana tany @ vazaha koa ireo asa goavana indrindra eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao ity. Sao dia mba hidiran-doza @ izany e! Ny mpamatsy vola rahateo tsy maintsy hanidy ny robinet satria coup d'etat iny tranga teto iny. Ka zara ary misy an'ireo mba azahoana vola koa roahana aiza indray.
Manarak'izay dia maromaro ihany ireo orinasa hiala eto madagasikara satria tsy misy ny filaminana ara-politika ka any @ 5 na 6 taona any indray izireo vao hiverina. Ny orinasa afakaba sinoa no tena mitsaoka an-daharana satria maro maro ihany ny orinasa tantanin'izy ireo no voaroba t@ ireny krizy ireny. Ny etsy @ citic ohatra dia lasa nifindra any afrika atsimo ny tena tompon'ny vola betsaka tao. Torak'izany koa ny courts izay hanao chômage teknika koa manomboka ato ato ary efa atsasaka karama no raisin'ireo mpiasa ankehitriny. Manomboka sahady ny krizy ara-tsosialy eto Madagasikara.
Misy olona mpiavady ohatra mitomany fotsiny no ataony ao @ radio ao fa may ny orinasa niasan'izy mivady ny trano hipetrahana anefa hofaina ny zanaka mandoa saram-pianarana. Ao ny mpivady lasa chômage sy ireo olona analina very asa tsy fidiny t@ iny ady seza teto iny. Ireo izao no tokony jerena akaiky mihitsy. Ny mpandraharaha malagasy maro izay banky tampoka tao anatin'ny 1 andro monja tao @ tranom-barotra citic sy ny etsy @ supreme ny tao @ zoom ny teny @ smart tanjombato. Mila mifehy kibo mihitsy enao ry Ingahy filoha ambony ny tetezamita fa hamay be ity fitondranao ity. Ny ady seza izay manomboka sahady eo @ samy mpitolona. Izahay moa dia mitazana fotsiny sisa koa nareo tsinona milaza fa mahavita azy ka ketreo ao aloha mba ho hita tsara ireny vava be teo @ kianja ireny e.